बुधबार, चैत्र ४, २०७७
कोरोना खोप कार्यक्रम असफल हुने जोखिम साथै दुवै डोज नलगाएमा खोपको कुनै अर्थ हुँदैन
डा. रवीन्द्र पाण्डे-हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका थियौं, महामारीको समयमा खोपको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ भनेर । १ जनालाई खोप लगाउँदा उक्त व्यक्तिको दोस्रो मात्रा स्टकमा राख्नुपर्छ । नेपालमा हालसम्म २३ लाख ४८ हजार खोप आयो ।
यो खोप टुटफुटलाई घटाएर १० लाख जनाको लागि मात्र पर्याप्त हुन्थ्यो । झन्डै १७ लाख व्यक्तिलाई पहिलो मात्रा लगाइएको छ । हाम्रो ७ लाख मात्रा ऋणात्मक भएको छ । हामीले यति लाखलाई खोप लगायौं भन्नुको कुनै अर्थ छैन, दुवै डोज नलगाएसम्म ।
खोप आउँछ भनेको भरमा खोप आउंदैन । हाम्रो एयरपोर्टमा नआएसम्म खोप आउने ग्यारेन्टी गर्नुहुँदैन । एउटा देशले किनेको सामान एयरपोर्टबाट अर्को देशले हाइज्याक गरेको हामीलाई थाहा नभएको हैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिम यो कुरामा सचेत हुनुपर्थ्यो ।
अब सरकारले भारतबाट किनेको १० लाख मात्रा ल्याउन उच्चस्तरबाट पहल गर्नुपर्छ अनि त्यो खोपलाई ७ लाख ऋणात्मकलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । किनकि २ डोज नलगाएमा खोपको कुनै अर्थ हुँदैन ।
त्यस्तै चीनले दिने भनेको ८ लाख खोप तुरुन्तै ल्याएर दीर्घबिरामीलाई दिनुपर्छ । भारतले यो चरणमा ४५ बर्षमाथिका दीर्घरोगीलाई खोप दिइरहेको छ ।
स्वस्थ तथा एकपटक संक्रमण भएका व्यक्तिलाई खोप लगाउन हतार गर्नुपर्दैन । अर्को चरणमा उहाँहरुलाई खोप दिन सकिन्छ । एक एक मात्रा खोपको सदुपयोग र स्टोर संगसंगै लैजानुपर्छ ।
कोरोना खोप कार्यक्रमको असफल हुने जोखिम
कोरोना खोप कार्यक्रम ब्यबस्थित गर्नु जरुरी छ । महामारीको समयमा खोपको सिद्धान्त पालना गरेनौं भने खोपको कुनै अर्थ हुँदैन ।
नेपालमा हालसम्म कोभिशिल्डको खोपको आयात
भारतबाट उपहार – १० लाख डोज
भारतबाट किनेर ल्याएको – १० लाख डोज
कोभ्याक्सबाट आएको – ३ लाख ४८ हजार डोज
जम्मा आएको = २३ लाख ४८ हजार डोज
हिंजोसम्म खोप लिएका व्यक्ति = १५ लाख
१५ लाख व्यक्तिले खोप लिंदा १५ लाख डोज स्टकमा राख्नुपर्छ । दोस्रो डोज लगाउन नपाउने स्थिति भयो भने पहिलो डोज मात्र लगाएका व्यक्ति ३ महिनामात्र सुरक्षित हुनसक्छन् । दोस्रो मात्रा नपाएमा पहिलो मात्रा लगाएको अर्थ हुँदैन । सरकारले जति जनालाई खोप दिन्छ, त्यति नै मात्रा स्टकमा राख्नुपर्थ्यो । हिंजोसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने पहिलो मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई दोस्रो मात्रा लगाउनको लागि ६ लाख ५२ हजार डोज अपुग हुन्छ ।
अहिले भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएको छ । महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तामिलनाडु, पंजाब लगायतका राज्यमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । महाराष्ट्रमा मात्र दिनको १५ / १६ हजारको दरले संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । दिल्ली, गुजरात, मध्यप्रदेशदेखि नेपालसंग सिमाना जोडिएका राज्यमा पनि संक्रमितको संख्या पहिलेभन्दा बढ्ने गतिमा देखिन्छ ।
भारत सरकारले ती राज्यमा सबैलाई खोप दिने तथा अब आफ्नो देशको अवस्था सुधार नभएसम्म खोप बाहिर नपठाउने भनेको छ । नेपालले किनेको बाँकी १० लाख डोज ल्याउन ठूलो पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै ४ डलरको खोपलाई एजेन्ट नियुक्ति गरेर ६.५० डलरको दरले खोप किन्ने प्रयत्नले झन् ढिलाइ हुनसक्छ ।
सरकारले चीनले दिने भनेको ८ लाख भेरो सेल भ्याक्सिन तुरुन्तै ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र हैन रुस र चीनसँग खोप किन्ने पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोभ्याक्स सुबिधाको खोप छिटो ल्याउने पहल गर्नु जरुरी छ ।
अष्ट्रेलियाले किनेको एस्ट्रेजेनेकाको २ लाख ५० हजार मात्रा आफ्नो देशमा लैजाने क्रममा इटलीले जहाज रोकेको धेरै भएको छैन । युरोपमा महामारी ब्यापक भएकोले खोप बाहिर दिनुहुँदैन भन्ने मत बढेको छ । क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशमा पनि खोपको तिर्खा उस्तै छ ।
सरकारले बिभिन्न कम्पनी र संस्थाबाट छिटो खोप ल्याउने तथा पहिलो डोज लगाएका हरेक व्यक्तिको दोस्रो डोज स्टोरमा सुरक्षित गर्ने सिद्धान्तमा चुक्यो भने खोप कार्यक्रम बालुवामा पानी हुनेछ । यस्तो संबेदनशील बिषयमा सरकार जिम्मेवार र परिपक्व हुनु अत्याबश्यक छ ।
– डा. रवीन्द्र पाण्डेको फेसबुकबाट
थाह पाइराख्नुस् : सुत्नु अघि के गर्ने, के नगर्ने ?
मधुमेह रोकथामका लागि दिनहुँ यी ५ खानेकुरा खानुहोस्
तपाईले खाने कोक, सक्कली कि नक्कली ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
सर्वाङ्ग नग्न सुत्दाको फाइदा जान्नुहोस्
पायल्स भएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब यसरी गनुहोस् उपचार
कस्तो केरा खानुहुँदैन ?